हेटौंडाबाट आयो ! दुख’द ख’वर – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/हेटौंडाबाट आयो ! दुख’द ख’वर
हेटौंडाबाट आयो ! दुख’द ख’वर
वाग्मती / वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँ’डास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका दुई ट्रकमा आज आग’लागी भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको भ्यालिट प्यालेट दाना उद्योग अगाडि रोकेर राखिएका ट्रकमा आग’लागी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मकै लोड गरी राखिएको ना ५ प ६५०३ तथा ना ६ ख ७८२६ नम्बरको ट्रकमा प्राविधिक कारण आग’लागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । आग’लागीबाट ना ६ ख ७८२६ नम्बरको ट्रक क्षति’ग्रस्त भएको छ भने ना ५ प ६५०३ ट्रकमा आंशिक क्ष’ति पुगेको बताइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको दमकल, सशस्त्र प्रहरी, औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो ।
यसैबीच त्रिभुवन राजपथस्थित थाहा नगरपालिका वडा १२ पिस्टुङ गैरीगाउँमा रहेको एक ढुङ्गाखानीमा गए राति पहिरो जाँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । ढुङ्गाखानीमा काम गर्ने ५४ वर्षीय कालु मुक्तानको मृ’त्यु भएको हो । मुक्तानको शव खानीभन्दा ३०० मिटर तल फे’ला परेको प्रहरीले जनाएको छ । पुर्बेलि न्यूजबाट
दशैंको मुखमा पूर्वराजकुमारी प्रेरणा लाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलको कडा आदेश !